ရေးသူ လင်းကြယ်ဖြူ အချိန် 7:23:00 PM5ယောက်ရဲ့အမြင်
စိတ်ထောင်း ကိုယ်ကြေ ပြေလျော့စေ - ၃
အရင်တုန်းက လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ နေရင်း Stress အနည်းအကျင်း(သို့)အများကြီး တွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ခံစားနေရတဲ့ သူတွေအတွက် စိတ်ထောင်းကိုယ်ကြေ ၊ စိတ်ထောင်းကိုယ်ကြေပြေလျော့စေ-၁ ၊ စိတ်ထောင်းကိုယ်ကြေ ပြေလျော့စေ - ၂ ဆိုတဲ့ စာစုလေး တွေမှာ ဘာကြောင့် Stress တွေရတတ်ကြ တာလဲ ဆို တာနဲ့ Stress တွေရလာရင် ဘာတွေဖြစ်လာတတ်တယ်ဆိုတာကို ဆွေးနွေးခဲ့ ဖူးပါတယ်။
ဒီတစ်ခါတော့ လုပ်ငန်းခွင်မှာ/အလုပ်လုပ်နေရင်း ပေါ်ပေါက်လာတတ်တဲ့ အဲ့ဒီ့ Stress တွေကို ဘယ်လို ရင်ဆိုင်ပြီး လျော့ပါး ပြေပျောက်အောင် ဘာတွေ လုပ်သင့်တယ်ဆိုတာ လေးပါ။တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ဘာကြောင့် Stress ရတယ်ဆိုတာ မတူကြသလို ၊ အခုနောက်ပိုင်း ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်(Research) တွေအရဆိုရင် တစ်ချို့ Stress တွေဟာ အလုပ်နဲ့လူ ကို အထောက် အကူ ပြုနေ တယ်လို့တောင် ဆိုထားကြပြန်ပါတယ်။
စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်တွေ ကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်း ကြတဲ့နေရာမှာ အများနဲ့ဖြေရှင်းတဲ့နည်း (Organizational Approach) နဲ့ တစ်ဦးချင်းကိုယ်တိုင် ဖြေရှင်းနည်း(Individual Approach) ဆိုပြီးရှိပေမယ့်..ဒီတစ်ခါတော့ Individual Approach နည်းများကိုပဲ ဦးစားပေး ဆွေးနွေးပါရစေ။
တစ်ဦးချင်းဆီမှာ Stress ကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းပုံတွေကွဲလွဲကြပါသတဲ့။အဲ့ဒီထဲမှာ မှ Positive Copers နဲ့ Negative Copers ဆိုပြီး ကွဲပြားကြတယ် လို့ဆိုပါတယ်။ လူတစ်ဥိးရဲ့Attitude နဲ့ အမြင်ပေါ် မူတည်လို့ အကောင်းနည်းလမ်းများနဲ့ အဆိုးနည်းလမ်းများ ဆိုပြီး Stress ကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းပုံတွေ (How to deal with stress!!)တွေက မတူညီကြပါဘူး။
Negative Copers များကတော့.(.ဒါမှမဟုတ် အဲ့သလိုတွေလုပ်မိနေပြီဆိုရင်တော့ Negative Copers ထဲမှာပါ နေပြီ ဆိုရ မှာ ပေါ့ နော..)
Smoking (ဆေးလိပ်စသောက်ခြင်း(သို့)သောက်လေ့ရှိတာထက် ပိုပြီးသောက်တတ်ခြင်း တို့ဖြင့် တစ်နည်း)
Drinking (အရက်သေစာ မှီဝဲ တတ်လာခြင်း(သို့) သောက်သုံးနေကျထက် ပိုမို သောက်သုံးခြင်း ပြုလို့တနည်း)
Illegal Drugs(မူးယစ်ဆေးဝါးကို သုံးစွဲ လို့တစ်နည်း)
Blaming others (မိမိ ပတ်ဝန်းကျင်/အသိုင်းအ၀န်းကို အပြစ်တင် လို့ တနည်း. .ဥပမာ.. သူတို့ကြောင့် ဒါတွေဖြစ်ရတာ ဆိုတာ မျိုးပေါ့)
Other self destructive behaviors (ပြီးတော့ မိမိကိုယ်ကိုယ် ဒုကရောက်စေတဲ့ အထက်ပါနည်းများ (သို့).အော်ဟစ်ညည်းတွားခြင်းများ..စိတ်တိုပေါက်ကွဲခြင်းများ..သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာ နေထိုင်ခြင်းမရှိတော့သော အနေအထား များ..တွေဝေ ခြင်းများ .စိတ်နဲ့လူနဲ့မကပ်ခြင်းများ..အာရုံစူးစိုက်မှုလျော့နည်းခြင်းများ..မေ့လျှော့ပေါ့ဆ လာတတ်ခြင်းများ ….စတဲ့ နေထိုင်ပြုမူ ဆောင်ရွက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမျိုးတွေ)...
...စတဲ့ အလေ့အထများနဲ့ Stress တွေကိုဖြေဖျောက် ဖို့ကြိုးစားလေ့ရှိပါတယ်။
~~~~~(ဒါပေမယ့် ဒီလိုနည်းလမ်းတွေဟာ တစ်ခဏတာ သာ စိတ်ပြေပျောက် မှုကို ရရှိစေတဲ့အပြင် မိမိကိုယ်တိုင် အပေါ် ဒုက္ခ ဘေးဥပါဒ်တွေ ရောက်စေနိုင်တဲ့ အတွက် Stress ကို အမှန်တကယ်ပြေလျော့စေခြင်းမရှိ သလို ပြုမူ ဆောင်ရွက်ရန်လည်း လုံးဝ မသင့်တော် မမှန်ကန်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ ဖြစ်တယ်တာမို့ အထူး သတိထားသင့်ပါတယ်။)~~~~~
Positive Copers တွေကတော့ stress တွေများလာရင်.(ဒါမှမဟုတ် stress တွေများတိုင်း ဒီလိုလေးတွေလုပ်တတ်ရင်တော့ Positive Copers ပေါ့နော..)
Exercising (ကစားခုန်စား၊လေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်လို့တစ်နည်း ...ဥပမာ-ပြေးခြင်း၊ လမ်းလျှောက်ခြင်း ၊ GYM သို့သွားခြင်း ၊ ရေကူးခြင်း စတဲ့မိမိ ၀ါသနာပါရာ တစ်ခုခု ကို လုပ်ကိုင်တတ်ကြပါတယ်)
Support groups (သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများနဲ့အချိန်ပေးလို့ အတူတကွ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စကားပြောခြင်း ၊ ဆွေးနွေးခြင်း ၊ပျော်ပွဲစားထွက်ခြင်း၊သီချင်းဆိုခြင်း၊ရယ်စရာများပြောခြင်း..စတဲ့ စိတ်ပြေလျော့စရာ အချိန်တွေပေးလို့ တစ်နည်း)
Yoga (အကြောဖြေ စိတ်ပြေလျော့စေရန် Yoga ကျင့်စဉ်ဖြင့် တစ်နည်း)
Meditation (တရားထိုင်ခြင်း၊ တရားမှတ်ခြင်း၊ စိတ်ကိုတည်ငြိမ် အောင်စုစည်းခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ပုတီးစိပ်ခြင်း..စတဲ့ စိတ်အလေ အလွင့် နည်းပါးအောင် စိတ်ကိုတတ်နိုင်သမျှ စုစည်းတည်ငြိမ်စွာထားနိုင်အောင်ပြုလုပ်ပေးတဲ့ နည်းများ ဖြင့် တစ်နည်း)
Good Eating Habits ( အဟာရပြည့်ဝလို့ကျန်းမာရေးအတွက်သင့်လျှော်မယ့် အစားအသောက်များကို စားသုံးခြင်း၊ အစား အသောက် အချိန်မှန်အောင် စားသောက်ခြင်းများဖြင့် တစ်နည်း)
Changinganegative attitude (မိမိစိတ်မှာထင်ဟပ်နေတဲ့ စိတ်ညစ်စရာ တွေ စိတ်ဆင်းရဲစရာတွေကို တတ်နိုင် သလောက် အချိန်ပိုင်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ် မေ့ပျောက်အောင်ကြိုးစားခြင်း(သို့) မိမိ တစ်ဦးတည်းတစ်ယောက် တည်းမှာ ပဲ ပူပင်သောကတွေ ရှိတတ်တာ မဟုတ်ကြောင်း နားလည်နိုင်/တတ် အောင်ကြိုးစားခြင်း၊ မိမိမှာ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ပြသနာရဲ့ အဓိက အကြောင်းအရာ ကိုနားလည်ပြီး စိတ်ညစ်ညူးနေခြင်းထက် ဘယ်လိုအဖြေရှာ ဖောက်ထွက်မ လဲ ဟူ စဉ်းစားတွေးခေါ်ခြင်း ၊ မိမိဘာမှ မတတ်နိုင် မပြောင်းလဲ နိုင်သောအကြောင်းအရာများ အတွက် စိတ်ညစ်၊ စိတ်ဓါတ်ကျနေမည့်အစား မိမိဘာတွေတတ်နိုင်၊ဘာတွေ လုပ်နိုင်သလဲ ဆိုတာမျိုးကို တွေးတော ကျင့်သုံးခြင်း ၊စိတ်အားကို တက်ကြွစေမည့် စာပေများ ဖတ်ရှုလေ့လာခြင်း အစရှိတဲ့ နည်းများ ၊ မိမိစိတ်ကို ထည့်သွင်း နှစ်မြုပ်ထားနိုင်မည့် ကိစ္စ တစ်ခုခု ကို လုပ်ကိုင်ခြင်း(Blogging တာ တောင် အဲ့ဒီ့အထဲ ပါနေမလားမသိ) ဖြင့်တစ်နည်း… (ဒီနည်းကတော့ စိတ်ဓါတ်ပိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အတွက် အချို့အတွက် တစ်ချို့အချက်တွေ (သို့) အားလုံးကို ကျင့်သုံးနေနိုင်ပေမယ့်..တစ်ချို့အတွက်တော့ Positive Thinking ဆိုတာက Attitude ပေါ်လိုက်လို့ လွယ်ကူချင်မှလွယ်ကူပါလိမ့်မယ်။လူအမျိုးမျိုး..စိတ်အထွေထွေ ဆိုသလိုပေါ့။)
.....စလို့ Stress ဒဏ် ကို ရင်ဆိုင် ဖြေရှင်း ကြပါတယ်။
ဒီလို နည်းတွေကတော့ အားလုံးအတွက် သင့်တော်မှန်ကန်ပြီး ဘာဘေးဥပ္ပါဒ်မှ မရှိတဲ့အတွက် Positive နည်းလမ်းများနဲ့သာ Stress တွေကို ပြေလျှော့ / ဖြေပျောက်စေသင့်ပါတယ် ဆိုတာ လေးကို လက်လှမ်းမီသလောက်ကလေးပါ။
နောက်ထပ်စာစုလေး တစ်ခုလေးမှာတော့ Stress တွေကို ဖြေရှင်းရာမှာ အများနဲ့ (လုပ်ငန်းအလိုက်) ဖြေရှင်းနည်း Organizational Approach နဲ့ တစ်ဦးချင်းအလိုက် Individual Approach ဆိုပြီး ရှိတဲ့ အထဲက Individual Approach မှာ ဖြေရှင်းနည်း၊ကိုင်တွယ်ပုံ အသေးစိတ် အဆင့်လေးတွေ ကို လက်လှမ်းမီ သလောက်ကလေး ထပ်မံဖော်ပြ ပေးသွား ပါရ စေ လို့........
မိတ်ဆွေများ အားလုံး ပျော်ပါစေ
ရေးသူ လင်းကြယ်ဖြူ အချိန် 5:54:00 AM 16 ယောက်ရဲ့အမြင်
နားရန်မလွှဲသာ လို့ "အိမ်အိုစုတ်"မှာ နေခဲ့ရတာတဲ့.....။.....။
(ကဗျာခေါင်းစဉ်လေးကို တော့ သူငယ်ချင်း ကျော်စိုးခိုင် နဲ့ ရွှေဇင် တို့ က ၀ိုင်းစဉ်းစားပေးကြလို့ ကျေးဇူးပါ)
ရေးသူ လင်းကြယ်ဖြူ အချိန် 7:09:00 AM 19 ယောက်ရဲ့အမြင်
“မျှော်လင့်ချက် နဲ့ အသက်ရှင် ရင် မျှော်နေရင်း လင့်သွားမယ်” ၊ ဒါကြောင့်မို့ “ရည်မှန်းချက် ၊ ဦးတည်ချက် ကလေးတွေ နဲ့ အသက်ရှင်တာက ပိုပြီး အဓိပ္ပါယ်ရှိတယ်”…..ဆိုတဲ့ ဆရာတော် တစ်ပါးဟောပြ သွန်သင်မှုလေးကို သတိရရင်း နဲ့ အဲ့ဒီ့ Aim/Objective/Goal နဲ့ Plan ဆိုတာလေးတွေ ကို အတွေးရောက်သွားမိ ပါတယ်။
လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာ ၊ Organization တွေ ထဲမှာ တာဝန်ထမ်းနေရသူများအဖို့ အဲ့ဒီ့ စကားလုံးတွေကို ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်သလို ဦးတည်ချက်တွေကို ချမှတ်တဲ့နေရာမှာ ဘယ်လို အချက်တွေနဲ့ ပြည့်စုံရမယ်ဆိုတာကို သိကြပါတယ်။နောက်ပြီး ဒီလို ဦးတည်ချက် ချမှတ် ဆောင်ရွက်တတ်ခြင်းဟာ အလုပ်အတွက် သက်သက်သာမကပဲ မိမိ ဘ၀ အတွက်လည်း အချိန်ကို တန်ဖိုးရှိစွာ အသုံးချရင်း အများကြီး အထောက်အကူပြုနိုင်တဲ့ အကျင့်ကောင်းလေး ပါပဲ…တစ်နေ့စာ… တစ်ပတ်စာ … တစ်လစာ..ဒါမှမဟုတ် တစ်နှစ်၊နှစ်နှစ် စသည်ဖြင့် တတ်နိုင်သလောက် ဦးတည်ချက်ကလေး တွေ နဲ့ လုပ်စရာ ရှိတာ ကို ဆက်လုပ် နေရင် ထိုက်သင့်သလောက် အကျိုးပေး တတ်တယ်လို့ ဆိုထားကြပါတယ်။
Objective ၊ Goals ..စတာတွေ ကို ချမှတ်ဆောင်ရွက် မယ်ဆိုရင် အရင် ဦးစွာ “SMART” ဖြစ်ရမယ်တဲ့။ဒါကတော့ အတော်များများ က သိနေပြီးကြသားပါ။ဒီ(Acronym)အတိုကောက် "SMART" လေးကို အကျယ်ချဲ့ရရင် တော့ ဦးတည်ချက်တွေ ကို ချမှတ်တော့မယ်ဆိုရင် လိုက်နာရမယ့်..ထည့်စဉ်းစားရမယ့် အချက်ကလေး တွေပါ။သူတို့လေးတွေက တော့ ........
Specific (တိကျနိုင်သမျှတိကျပြီး ၊ ရှုပ်ထွေးများပြားခြင်းမရှိတဲ့ အကြောင်းအရာကိုရွေးချယ် ရပါမယ်)
Measurable ( အချိန်ပိုင်း ၊ ကိန်းဂဏန်း သဘောအရ တိုင်းထွာ နိုင်ခြင်းရှိရပါမယ်..ဥပမာ - ရက်၊လ၊နှစ်၊ အရေ အတွက်.. စ လို့ပေါ့)
Achievable (တကယ်ရောက်နိုင် ရနိုင် အကြောင်းအရာ၊ဦးတည်ချက်လည်း ဖြစ်ရပါယ်..အဓိပ္ပါယ် ပါရမယ်တဲ့)
Realistic (လက်တွေ့ဆန်ပြီး တကယ်ဖြစ် လည်းဖြစ် နိုင်မယ့် အကြောင်းအရာ လေးလဲ ဖြစ်ရမယ် ဆိုထားပြန် ပါတယ်)
Time-bounded (ပြီးတော့ အချိန်ကို လည်းကန့်သတ်ရန် လိုပါသေးတယ်။ဥပမာ..လာမည့် သက္ကရာဇ် ဘယ်လောက် မှာဘာကို ရ ရမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော…)
ဦိးတည်ချက်တွေကို ချမှတ်ဆောင်ရွက်ရင် အဲ့ဒီ့အချက် ငါးချက်နဲ့ ကိုက်ညီမှ ပြည့်စုံတယ်ဆိုထားပါတယ်။အခုနောက် ပိုင်း တော့ “SMART” ကနေ “SMARTER” ဆိုပြီး SMART နောက်ကနေ E (Evaluated ) နဲ့ R (Review) ဆိုပြီး ထပ်ဖြည့် ထားရင်း (John Adair ဆိုတဲ့ Business Management and Leadership Guru တစ်ဦးက စဉ်းစားပြထား တာလေးပါ) ဦးတည်ချက်ကို ရောက်အောင်သွားနေတုန်း လိုအပ်သလို အားနည်း အားသာချက် တွေ ကို ကြည့်နိုင်ရင်း ပြင်ဆင်သင့်တာ ပြောင်းလဲ သင့်တာကို ပြောင်းနိုင်အောင် ထည့်စဉ်းစားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။အရွယ်ရောက်သူ အတော်များများမှာ (အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြတယ်ဆိုရင် ) အဲ့ဒီ့ ဦးတည်ချက် ၊ ရည်မှန်းချက် ကလေးတွေ ကတော့ ရှိနေတတ်ကြ စမြဲမို့ ဦးတည်ချက်များကို ဘယ်လို ချရမလဲဆိုတာကို အသေး မစိတ် တော့ပါဘူး။
ဒီစာစုလေးမှာ ကတော့ အဲ့ဒီ့ ဦးတည်ချက်တွေ ကို ချမှတ်ပြီး အရောက်လှမ်းကြတဲ့နေရာမှာ Ambition ခေါ်တဲ့ ရည်မှန်းချက် ဆိုတာကို ထက်သန်ပြီး ထိထိရောက်ရောက် အောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်တတ်ကြ သူ များ ရဲ့ စိတ်နေသဘောထားလေးတွေ
၊အကျင့်စရိုက် လေး တွေ ကို Research တစ်ခုက ချပြထားတာလေး ဝေမျှ လိုက်ပါရစေ...
ဒီ အချက်ကလေးတွေ နဲ့ များများကိုက်ညီရင်တော့ ချမှတ်ထားတဲ့ ဦးတည်ချက်တွေ ကို အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက် လိုတဲ့ Ambition တွေ များတာ သေချာပါတယ်။အားလုံးကိုက်ညီတယ်ဆိုရင်တော့ ရည်မှန်းချက်ကို ထိထိမိမိ လှမ်းဆက် နိုင်အောင် Ambition ကတော့ အကောင်းဆုံး အနေအထား ပါတဲ့ ..အဲ့ဒီ့ အချက်ကလေးတွေ ကတော့…
You see yourself asayoung person (ကိုယ့်စိတ်ကို နုပျိုအောင်နေတယ်..နုပျိုအောင်ထားတတ်တယ်)
You are stable , calm, adventurous , socially bold, confident and self-assured.(တည်ငြိမ်ရဲရင့်တယ်၊ ပေါင်းတတ်သင်းတတ်တယ်၊ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်း ယုံကြည် သင့်သလောက်ယုံကြည် ပြီး ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မယ် ဆိုတဲ့ စိတ်ထားတတ်တယ်)
You haveahigh need for achievement.(အောင်မြင်အောင်လုပ်လိုတဲ့ စိတ်ပြင်းပြတယ်)
You welcome change as positive(အပြောင်းအလဲ တွေ ကို အကောင်းဖက်ကနေမြင်ပြီး ရင်ဆိုင် တတ်တယ် ၊ ရင် ဆိုင်နိုင် အောင်ကြိုးစားတယ်၊အဆိုးတွေ ကို အကောင်းစိတ်နဲ့ ရင်ဆိုင်တတ်တယ်)
You have sense of freedom and feel that you are going somewhere ( နေရာစွဲ၊ပုဂ္ဂိုလ်စွဲတွေ သိပ်မဖြစ်တတ်ဘူး Open-minded ဖြစ်တတ်တဲ့သဘော နေမယ်နော်)
You enjoy taking calculated risks ( Challenge တွေ ကို တတ်နိုင်သမျှ ကို ရင် ဆိုင်တတ်တယ်၊ရင်ဆိုင်ရဲတယ်)
You spendalot of time with your superiors ( အရာရှိတွေ ၊ အကြီးအကဲများထံမှ တတ်နိုင်သမျှ အချိန်ယူ သင်ယူတတ်တယ်..လေ့လာတတ်တယ်)
You are willing to move ( အရွှေ့အပြောင်းတွေ ကို သိပ်မမှုဘူး၊အပြောင်း အလဲ အနေအထား တွေကိုလဲ လိုလား တတ် တယ်)
You are rarely ill or absent from work ( အကြောင်းကြောင်းကြောင့် အလုပ် ပျက်ကွက်တတ်တာ မျိုးတွေ သိပ်မ ရှိဘူး)
Stress and Tension do not effect you (စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ကို အလွယ်တကူ ကျော်လွှားနိုင်တယ်)
You do not smoke and take regular exercise ( ဆေးလိပ် ၊ မူးယစ်တတ်တာ တွေ လုံးဝ (သို့) တတ်နိုင်သမျှ မမှီဝဲပဲ လေ့ကျင့်ခန်း ၊ ကစားခုန်စား မှန်မှန်လေး လုပ်တတ်သေးသတဲ့၊ကျန်းမာဖို့က ပထမ ဆိုသလိုပေါ့)
Your career has proved more successfully than you originally hoped ( လုပ်ငန်းခွင်မှာ ထင်တာထက် ပိုပြီး Recognized အဖြစ်ခံရရင် (သို့) ထင်တာထက် အောင်မြင် နေရင်တဲ့…ဒါကတော့ နေရာတိုင်းမဟုတ်သလို Ambition အတွက် လည်း အဓိက ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ အချက်မဟုတ်ပါဘူး)
အဲ့ဒီ့ အချက်ကလေးတွေ ကတော့ ဦးတည်ချက်နဲ့ နေထိုင်ကြတဲ့ သူတွေအတွက် Ambition ဆိုတာကို အားကောင်းအောင်မြှင့် တင်ပေးတတ်သလို ..သူတို့လေးတွေက Ambition တွေကောင်းတဲ့ သူတွေ မှာ တွေ့ရတတ်တဲ့ စရိုက် လက္ခဏာ လေးတွေပါ တဲ့။ပြီးတော့ အဲ့ဒီ့ ဦးတည်ချက် လေးတွေ ၊ ရည်မှန်းချက်လေးတွေ နဲ့ ပတ်သက်လို့ အနက်အဓိပ္ပါယ် ပြန်ပြီး ရှင်းထား တာလေးကို လေ့လာ လိုသူတွေ အတွက် မူရင်းအတိုင်းလေး ထည့်ပေး လိုက် ပါတယ်...
1. Goal = the selected result to be achieved only with effort
2. Objective = tangible, attainable end toward which effort is expended
3. Purpose = the desired result or movement toward it
4. Aim = the target aimed at
5. End = the intended effects of actions (as opposed to means)
6. Object = the same as end, but also conveys wish and motives
7. Mission = the purpose for which the individual or organization was ‘sent’
8. Plan = set of idea to achieve desired results
9. Vision =aconcept denoting clarity of foresight/sharpness of understanding ofascheme
10. Intention = what is in mind to do .........စတာလေးတွေပါ…
အားလုံးပဲ ရည်ရွယ်ရာ ၊ ဦးတည်ရာ လမ်း ကို အလှမ်း မပျက်ကြ ပဲ ကောင်းသော လိုရာတွေ ကို စွမ်းဆောင် ရယူနိုင် ကြပါစေ လို့.…..
ရေးသူ လင်းကြယ်ဖြူ အချိန် 5:36:00 AM 18 ယောက်ရဲ့အမြင်
၀တ်ရည် သောက်ဖော်များ (သို့) ရေကြည်ရာ မြက်နုရာ
အို.. ပျားပိတုန်းတို့ …..
လှမ်းကြလေပြီ တက်ညီလက်ညီ ပေါ့….
လိုရာခရီး ချီ နေဆဲ
ဒီလေထဲ ဒီမိုးက သည်းလို့ထန်
မဲညှို့ပြန် လို့ သူမာန်ခွင်းလည်း
ပူရန်အလျင်း မဲ့ အသင်းအဖွဲ့ နဲ့ တူတကွ
ကူကြဖေးကြ ရင်း ချီလာခဲ့ကြတာပဲ…..
အို ပျားပိတုန်းတို့ …..
ပန်းပွင့်ဝေတဲ့ သစ်တစ်ပင် မှာ
ရမ္မက်ပွေလွဲ လို့ စိတ်မကွဲ
အရိပ်မဲ တွေ ပွေ့ပိုက်ရင်း တော့ ဒို့ မနေဘူးဟေ့…….
ချစ်ကြည်လို တဲ့ နှလုံးသားနဲ့
မြင်အောင်ပြမယ့် ဒို့ ချစ်ခြင်းကြောင့်
စစ်ခင်း လို သူတွေတောင် မှင်သက်နောက်ဆုတ်စေမယ်…..
အို ပျားပိတုန်း တို့…..
၀တ်ရည်သောက် လို့ အားတို့ဖြည့်
ယိုင်နိုင်လောက်ပါ ဘု ဒို့ဇာတိ နဲ့ ဒို့ ဂုဏ်
ဒို့ ပရ၀ုဏ် က ညီညွတ်ခြင်း နဲ့ လွှမ်းလို့ခြုံလို့ ပေါ့…….။ ။
(တစ်ပါးသော အရပ်ဒေသတွေ မှာ ပညာရှာ၊စီးပွါးရှာနေကြရင်း လူမျိုးတူ အချင်းချင်း မတည့်သူတွေ ရော ၊ချစ်ခင် စည်းလုံးကြသူတွေရော နှစ်မျိုးစလုံး နေ့စဉ်မြင်တွေ့နေတာ လေးတွေကို သတိထားမိရင်း အပြုသဘောနဲ့ စာစုလေးတစ်ခု အဖြစ် ဖန်တီးမိလိုက်ပါတယ်။အဆင်ပြေသလို ခံစားဖတ်ရှု နိုင်ပါစေ ခင်ဗျာ။)
ရေးသူ လင်းကြယ်ဖြူ အချိန် 3:25:00 AM 22 ယောက်ရဲ့အမြင်
စိတ်ထောင်း ကိုယ်ကြေ ပြေလျော့စေ - ၂
အရင်တုန်းက လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ နေရင်း Stress အနည်းအကျင်း(သို့)အများကြီး တွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ခံစားနေရတဲ့ သူတွေအတွက် "စိတ်ထောင်း ကိုယ်ကြေ" နဲ့ "စိတ်ထောင်းကိုယ်ကြေ ပြေလျော့စေ-၁" ဆိုတဲ့ စာစုလေးတွေမှာ ဘာကြောင့် Stress တွေရ တတ်ကြ တာလဲ ဆိုတာနဲ့ Stress တွေရလာရင် ဘာတွေဖြစ်လာတတ်တယ်ဆိုတာကို ဆွေးနွေးခဲ့ဖူးပါတယ်။
ခုတော့ Stress တွေကိုဘယ်လို ရင်ဆိုင် ဖြေရှင်းကြမလဲ ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို နောက်ထပ် စာစု တစ်ခုမှာ ဖော်ပြဖို့ ပြင်ဆင် နေတုန်းမှာ မိမိ ကိုယ်ကိုယ် ပြန်ပြီး Stress တွေ အလွယ်တကူ ရနိုင်တဲ့လူမျိုးလား မရနိုင်တဲ့ လူမျိုးလားဆိုတာကို စမ်းစစ် ကြည့်နိုင်တဲ့ အချက်ကလေးတစ်ချို့ကို ကြားဖြတ် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါရစေ။
Stress ဆိုတဲ့အရာက လူတစ်ဦးမှာ ဖြစ်ပေါ်လာတာ၊ခံစားနေရတာ က အဓိက ပြဿနာ မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီ့ ဖြစ်ပေါ်ခံစား လာတဲ့ Stress ကို အဲ့ဒီ့ လူ က မှားယွင်းတဲ့ အယူအဆ နည်းလမ်းများနဲ့ တုန့်ပြန်ခြင်း ၊ မှားယွင်းသော အတွေးအခ်ါများနဲ့ ရင်ဆိုင် တတ်ခြင်းဖြစ်ပေါ်လာမှသာ အဲ့ဒီ့ Stress က ကြောက်စရာကောင်းလာ ၊ စိုးရိမ်စရာကောင်းလာ ၊ ပြဿနာ တစ်ရပ် ဖြစ်လာမှာပါ။(ဒီအကြောင်း ကိုတော့ နောက်ထပ် စာစုလေးတစ်ခု မှာ အသေးစိတ် ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။)
ခုတော့ (အထူးသဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်တွေထဲမှာ) Stress တွေ အလွယ်တကူ ရရှိခံစား ရတတ်ကြတဲ့ သူ အတော်များများ မှာ တွေ့ရလေ့ ရှိတဲ့ အချက်ကလေးတွေ ကို အရင် ရေးချလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီ့ အချက်တွေနဲ့ နည်းနည်း ကိုက်ညီရင် Stress ရနိုင်ဖို့ နည်းနည်း အလားအလာရှိပြီး..များများကိုက်ညီရင်တော့ များများဖြစ်နိုင်ချေ ရှိပါတယ်။တစ်ခုမှ မကိုက်ညီတဲ့ သူဆိုရင်တော့ Stress(work-related)တွေကို အလွယ်တကူ ခံစားရလေ့ မရှိ တဲ့ သူမျိုးတွေမို့ ပျော်စရာပါပဲ။
အချက်ကလေးတွေ ကတော့ .........
(၁) အလုပ်/တာဝန် တစ်ခုမပြီးမချင်း (သို့) ပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်နေတုန်းမှာ မိမိ စိတ်ထဲမှာ လေးလံပြီး တာဝန်ပိနေသလို Pressure တွေ ၊ Tension တွေ ခံစားနေရတာ မျိုးတွေ …အစိုးရိမ်ကြီး နေတတ်တာမျိုးတွေ
(၂) မကြာမကြာ နာရီကို ကြည့်၍ အလုပ်လုပ် နေတတ်တာ မျိုး..အချိန်လုနေတတ် တာမျိုးတွေ
(၃) အလုပ်/တာဝန် ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း အမြဲလိုလို အလျင်စလို (သို့) ပျာယာခတ် ဗျာများ နေတတ်တယ်
(၄) ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခု ကို မသေချာ မပိုင်နိုင်လျက်နဲ့ အလျင်စလို ချတတ် လုပ်တတ်တာမျိုး..(ပြီးမှ မှားမှန်းသိတယ် ဆိုတာ မျိုး၊ မှန်ချင် လည်းမှန်မှာပေါ့)
(၅) နှေင့်နှေးကြန့်ကြာမှု တစ်စုံတစ်ရာ ရှိရင် စိတ်မရှည် သည်းမခံတတ်ခြင်းမျိုး ၊ စိတ်မအေးနိုင်ခြင်းမျိုးဖြစ် နေတတ်တာမျိုး တွေ (ဥပမာ-ကွန်ပျူတာ hang သွားတာမျိုး၊Lift/Elevator စောင့်ရတာမျိုး၊လိုချင်တဲ့ အရာက အချိန်မီမရောက်၊နောက်ကျ ရောက်လာ တာ မျိုးတွေ ကြုံရင်ပေါ့နော)ကိုယ့်ကို တစ်ယောက်ယောက်က နောက်ကနေ ဖိအားပေးနေတယ်လို့ အလိုလို ခံစားနေရတာမျိုး
(၆) စကားပြောတော့လည်း အလျင်စလို မြန်မြန်သွက်သွက် ပြောရင်း တစ်ခါတစ်ရံ အမှားမှားအယွင်းယွင်း ဖြစ်တတ်သေးတယ် (စိတ်လောနေ တာကိုး)
(၇) အမြဲတန်း အလုပ်ကို စိတ်ဇောကပ်ပြီး နောက်ကျမှာကြောက်လို့ အချိန်မှန်မှန် ရောက်တယ် ၊ တာဝန်ကျရာ ကို
အချိန်မှန်မှန် သွားတယ် ။နောက်ကျတာမျိုးမရှိစေချင်လို့ ဆိုတာမျိုး
(၈) တစ်ချိန်ထဲမှာ ပဲ အလုပ်တွေ ၊ လုပ်စရာတွေ ကို ခေါင်းထဲ အများကြီး စုပြုံထည့်ထားပြီး အားလုံးကို လည်း တစ်ပြိုင်တည်း လုပ်ချင်နေတယ် (တစ်ခါတစ်ရံ အလုပ်သိပ်များ တာဝန်သိပ်ကြီး လွန်းရင် ဖြစ်တတ်ပါတယ်) လုပ်နေရတယ်
(၉) လှုပ်ရှားတာ ၊ လမ်းလျှောက်တာ ၊ break time စားသောက်တာ က အစ မြန်မြန် သွက်သွက် နဲ့ အချိန်လုနေရ သလိုမျိုး ဖြစ်နေတာ ( ဗျာများ နေရတာကိုး)
(၁၀) တစ်ခါတစ်ခါ (သို့) အချိန်တော်တော် များများ (သို့) တစ်ချိန်လုံး စိတ်မရှည် ၊စိတ်တို နေတတ်တာ(အလုပ်လုပ်နေရင်း ကို တင်း နေတာ ပေါ့နော)
(၁၁) တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး (သို့) သူများတစ်တွေ နဲ့ စကားပြော ဆက်ဆံတဲ့ အခါမှာလည်း စိတ်မရှည်တဲ့ ကိုယ်အမူအယာ နှုတ်အမူအယာတွေ ဖြစ်နေတတ်တာတွေ ၊နောက် …မျက်မှောင်ကြုံ့၊မျက်နှာကြောတင်း သလိုဖြစ်နေတာ ၊မရီမပြုံးနိုင် ဖြစ်နေတာ တွေ၊ ပြီးတော့ ကိုယ်တိုင် ကို က Relax မဖြစ်တော့ပဲ အများနဲ့ပြောဆိုရာမှာ အလျင်လိုနေတာ မျိုးတွေ ဖြစ်နေတတ်တာ
(၁၂) ကိုယ့်ကို ကိုယ် အရမ်းကို ရည်မှန်းချက် ကြီးကြီး နဲ့ ဖြစ်ချင်ဇော တွေ လိုချင်ဇောတွေ (အလုပ်နဲ့ ပတ်သက် လို့ပေါ့နော ) တ အား ကြီး မားနေတတ်တာမျိုးတွေ (ရာထူးတက် တော့မယ် နဲ့ တူပါတယ်..ကြိုးစားနေတယ်တအားပဲ)
(၁၃) မိမိအလုပ် တာဝန်လစ်ဟင်းမှာ နဲ့ အမှား မခံချင်တာ တွေ ၊ သူများတွေ က အပြစ်အပြောခံရမှာတွေ ကို တအား ထည့်စဉ်း စား နေရင်း အလုပ်ကို တအား Energy (ကိုယ်အား၊ဥာဏ်အား)တွေ စိုက်ထုတ်ပြီး လုပ်နေတတ်တာမျိူးတွေ
(၁၄) အပြိုင်အဆိုင် လုပ်နေရတာမျိုး ၊ အပြိုင်အဆိုင် လုပ်တတ် တဲ့ အကျင့် ရှိ တတ်တာမျိုးတွေ (လိုအပ်တဲ့ နေရာမှာ ပြိုင်တာ ကောင်း ပါတယ်..မလိုအပ်ပဲ ကိုယ်က ချည်း နိုင်ချင်နေရင်တော့ ..အင်း….)
မိမိမှာ အဲ့ဒီ့ အချက်တွေ အတော်များများ နဲ့ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းမှာ လုပ်ကိုင် နေကြသလား ၊ ဒါမှ မဟုတ် လုပ်ငန်းအနေအထားကပဲ အဲ့သလို တွေ ဖြစ်အောင် ဖန်တီးပေးနေသလား ဆိုတာ မိမိကိုယ်ကိုယ် မေးခွန်းထုတ်ရင်း စဉ်းစားကြည့်စရာပါပဲ။အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလို အဲ့ဒီ့ အချက်တွေ နဲ့ များများ ကိုက်ညီရင် Stress ကိုခံစားရဖို့ များများ ကျိန်းသေနေပြီး ၊ နဲနဲ ကိုက်ညီရင် နည်းနည်း ဖြစ်နိုင်ချေရှိပါတယ်။လုံးဝမကိုက်ညီရင်တော့ ပျော်စရာပါပဲ No Stress At All ပေါ့နော။
တကယ်လို့ တော်တော်များများ (သို့) အားလုံး က မိမိ ရဲ့ နေ့တစ်ဒူဝ အလုပ်ခွင်မှာ ဖြစ်နေပြီ ဆိုရင်တော့ Stress တွေ ၀င်ရောက် လာနိုင်တာမို့ သတိထားစရာပါပဲ။မိမိမှာ Stress ရှိနေမရှိနေ သိစရာ လက္ခဏာတွေကိုတော့ အရင်က ရေးခဲ့ဖူးပါ တယ်။ဒါပေမယ့် လုံးဝ ပူစရာ မရှိပါဘူး(Stress ကြောင့် Stress ဖြစ်စရာ မလိုတော့ ပါဘူးပေါ့နော) ။ အဲ့ဒီ့ Stress တွေကို အမှန်အကန် ချေမှုန်း နိုင်မယ့် နည်းလမ်းကောင်းတွေ နောက်ထပ် “စိတ်ထောင်း ကိုယ်ကြေ ပြေလျော့စေ - ၃” ဆိုတဲ့ စာစု လေးမှာ လက်လှမ်းမီသမျှ ကြိုးစား ကြည့်ပါရစေခင်ဗျာ။
ရေးသူ လင်းကြယ်ဖြူ အချိန် 4:30:00 AM 14 ယောက်ရဲ့အမြင်
ဒီဇင်ဘာ တစ်ည နဲ့ စကားစမြည်
ဒီဇင်ဘာ တစ်ည နဲ့ စကားစမြည်
" ဒီဇင်ဘာ " ည တစ်ည ရဲ့ နှင်းငွေ့တွေ ကို
ညှင်းသွေ့သွေ့ လေပြေက ဆောင်ချ လာတော့
မှောင်ပြပြ ဒီ ညထဲ က အတွေးလှိုင်းတွေက
ပြေးခိုင်းလိုက်တယ် စိတ်တွေကို ယူဇနာတစ်သန်း
နွမ်းလျှ လို့တောင် နားချိန်မပေး အဝေးဆိုတာများထက် ပိုဝေးတဲ့ ကာလများဆီ…..
နှင်းဖြူတွေ ဆိုင်းသီ နေတဲ့ ပရ၀ုဏ်ထဲ
ဂုဏ်ကွဲ သတ္တိတွေနဲ့ မှတ်မိစရာမရှိအောင်ကို
ရပ်ကြည့်နေရင်း ကိန်းဂဏန်း ရေမရတဲ့
မြေခ သစ်ရွက် နွမ်း တို့ က လက်လျူရှု ပစ်ပယ်ခံ မတည်မြဲခြင်း နိယာမများ ကို
သိသာသမျှ တည်ခင်း ပွဲတော်ခံနေကြရင်း ကိုယ်ထင်ပြနေကြတယ်…….
ဒီညမှာပဲ မှိန်ပြပြ မာကျူရီ ခံစားမှု စည်းဝါးမှန်မှန် နဲ့
ညီးတွားသံ သဲ့သဲ့ တို့ က မြူးကြွနေကြလို့
တူးဆွစရာ တောင် သိပ်မလိုတဲ့ ရင်ခုန်သံ အိုဟောင်းတို့က
တိုတောင်းတဲ့ “နရီ ” ရိုက်ချက်ပြင်းပြင်း တွေ ကြားထဲ
နားကွဲ မတတ် အောင်တော်မူပတ်ပျိုး တေးသွားများနဲ့ ချက်ကျကျ ကခုန် ပျော်ပါး နေကြလေရဲ့…..
ဒီဇင်ဘာနေကွယ်ချိန် တစ်ခု ရဲ့ သဲကိုးဖြာ ညစည်းဝိုင်းထဲ
လှပြီးတိုင်း လှနေရက်ပုံကို ဖော်ကြူး လို့
ပျော်မြူးနေကြတဲ့ ငွေလွှာနှင်းစက်တို့တဖြောက်ဖြောက် နောက်
ကောက်ကောက် ပါအောင် လွင့်ပါးရင်း ခြေရာပျောက်သွားတာ
သေချာဆောက်မယ့် ရဲတိုက်တစ်လုံး ရဲ့ စိတ်ကူး ပုံကြမ်းလေး တောင် အစအနကောက်မရလောက်အောင်ပါပဲ…..
ဘာပဲပြောပြော စိတ်အတွေးက စိတ်အတွေးပဲ
အတိတ်အဆွေး တွေ ကိုခြေရာပြန်ကောက်နေတာ ဒီဇင်ဘာ ကြောင့်မဟုတ်ဘူး
ကြည်လင် လာတဲ့ အသိစိတ်တို့ က ပုံကြမ်းဆွဲလို့ သဲကွဲလာခါမှ
အမြဲပဲ လာနေကျ ဒီဇင်ဘာ ဟာ နှင်းတို့နဲ့ ပျော်မြူးလို့
ဖော်ကျူးလာခဲ့တဲ့ လှလှပပ ဆောင်းညတွေဟာ နှင်းပွင့်တို့ နဲ့ နေသားတကျ ရှိနေခဲ့တာ ဟိုး..ပဝေသနီ ကတည်းက….
ဒီလို အံဝင်ဂွင်ကျ ဒီဇင်ဘာညတစ်ည ရဲ့ နယ်ပယ်ထဲ
မလည်မ၀ယ် စိတ်ကူးတွေ ဖောင်ဖွဲ့ရင်း ရေဆန်မှာ
လေထန်တဲ့ စိတ်ဂရက်လှိုင်း တွေကို အံတုမိလို့
အကြံပြု ….ဝေဖန် သွားသတဲ့ လေ.. အဲ့ဒီ့ ဒီဇင်ဘာ ည ကလေးကပဲ ပေါ့
ဘ၀လေးတစ်ခုကို မှုန်ပျပျ ရ,ထားတာတောင် “နွေး နွေး ထွေးထွေး ” မနေတတ်တဲ့ ကောင် …တဲ့…..။…..။
ရေးသူ လင်းကြယ်ဖြူ အချိန် 4:00:00 AM 17 ယောက်ရဲ့အမြင်
စိတ်ထောင်းကိုယ်ကြေ ပြေလျှော့စေ (၁)
Work Stress Management အကြောင်းလေးကို ကျွန်တော် တက်ခဲ့ရတဲ့ သင်တန်းလေးတစ်ခုကနေ ရခဲ့တဲ့ ဗဟုသုတ လေး များ အပေါ် မှီငြမ်းပြီး လက်လှမ်းမီသလောက်ကလေး အတိုချုံ့လို့ဆွေး နွေး ပါရစေ…လိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ် ဆိုရင် အကြံပေး ပြုပြင်ပေး မှုကိုများ လေးစားစွာ မျှော်လင့်နေရင်း တစ်ဖက်ကလည်း ဖတ်ရသူ အတွက် နည်းနည်းလေး လောက် ကလေး ပဲ အကျိုး ရှိတယ်/ရှိမယ် ဆိုရင်တောင် ပျော်စရာပါပဲ…။
(ကိုယ်ကိုယ်တိုင် လည်း stress တွေ များနေရင်း..အဲ့သလိုများနေတာတွေကို နိုင်သလောက်ကလေးထိမ်းရင်းနဲ့ပဲ ...Stress အကြောင်းတွေ ကိုရေးဖြစ်နေပါတယ်....။)
အလုပ် အကိုင် (JOB/WORK)..တဲ့….ဟုတ်တယ်…အဲ့ဒီ့ အလုပ်ဆိုတဲ့ JOB ကို ကျွန်တော်တို့ အတော်များများ အလုပ်လုပ်ကြပါတယ်..အဲ့ဒီ့အလုပ်လုပ်ခြင်းကြောင့် ပဲ...
-အဲ့ဒီ့ဝင်ငွေ ကနေ တစ်ဆင့် တစ်ခြား(စားဝတ်နေရေး...လူနေမှု အဆင့်အတန်း..စတဲ့)လိုအင်တွေကို သင့်တော်သလောက် ပြည့်ဝ စေ တယ်(Fulfillsavariety of other needs) .....
-အလုပ်လုပ်နေခြင်းကြောင့် စိတ်စွမ်း ကိုယ်စွမ်းတွေ Knowledge တွေ ပညာတွေ အတွေ့အကြုံတွေ တိုးပွါးစေတယ်(Mental and physical exercise).....
-လူမှု ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး နယ်ပယ် ကျယ်ပြန့်လာစေတယ်။ပေါင်းတတ်၊သင်းတတ် ပြောတတ်၊ဆိုတတ် ဖြစ်လာစေ တယ်. (Social contact)....
-ပြီးတော့ မိမိကိုယ်ကိုယ် တန်ဖိုးရှိတယ်.. အလုပ်လက်မဲ့ မဟုတ်ပါ..စတဲ့ စိတ်ဓါတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ယုံကြည်မှုတွေကိုလည်း ခံစား ရရှိ စေတယ်.. (Feeling of self worth and competence).....
သို့သော် အလုပ်လုပ်နေကြပြီဆိုရင် မည်သည့် အလုပ်အကိုင်မှာမဆို Work related Stress လေးတွေကို (ရာထူး. .အလုပ် အကိုင် ကွာဟချက်တွေ ကို ထည်းမစဉ်းစားရင်တောင်မှ) အနည်းနဲ့ အများဆိုသလို ခံစားခဲ့ကြ ရဖူးမှာပါ ဒါမှမဟုတ် …ခံစား နေရ ကောင်းလည်းခံစားနေရမှာပါ..
အဲဒီ့ Work Stress ဆိုတာက ဘာလဲဆိုတော့ ..ဒီလိုပါတဲ့
"The harmful physical and emotional responses that occur when the requirements ofajob do not match the capabilities, resources, or needs of the worker.”
အလုပ်လုပ်နေရင်းနဲ့ အဆင်မပြေ ဖြစ်ရင်.ဒါမှမဟုတ် အလုပ်တာဝန်တွေ အရမ်းပိ ပြီးနေ ရင်..နောက်ပြီး. ပတ်ဝန်းကျင် (အ လုပ်ထဲမှာ) နဲ့ သဟဇာတ မဖြစ်ရင် ..မလုပ်ချင်ပဲ လုပ်နေရရင်။..ပြီးတော့ ဖြစ်ချင် လုပ်ချင်တာတွေ လိုနေတာတွေက မပြည့်နိုင်သေးရင် စတဲ့...စတဲ့ အချက်တွေ အကုန်လုံး (သို့) အချို့ကို ကြုံတွေ့ခံစား လာရပြီဆိုရင် ကိုယ့်မှာ စိတ်ပိုင်း / ရုပ်ပိုင်း ဆိုင်ရာတွေ ကို စိတ်ခံစားမှုကနေတစ်ဆင့် ထိခိုက်ခံစားလာရပြီး ကာယစွမ်းရည်..ဥာဏစွမ်းရည် နဲ့ လူမှုဆက်ဆံရေး စတဲ့ အပိုင်းတွေမှာ တုန့်ပြန်မှုတွေက လျော့ပါးကျဆင်းလာတတ်ခြင်းပါပဲ...။
(တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးမှာတော့ Stress ကို ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းအရင်းလေးတွေက မတူညီကြပါဘူး။တစ်ဦးအတွက် အဲ့ဒီ့ထဲက တစ်ချက်ကြောင့် stress တွေ ရစေပေမယ့် အဲ့ဒီ့တစ်ချက်ကပဲ အခြေအနေ အနေအထား ခံစားမှု စတာတွေပေါ်မူတည်လို့ နောက် တစ်ဦးအတွက် Stress ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်စေနိုင်ပါလိမ့်မယ်။လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေ ဆိုတော့ကာ ခံစားချက်တွေကလည်းမတူကြဘူးပေါ့နော။နောက်ပိုင်းမှာ အလုပ်ထဲ မှာ Stress ကို ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ Source လေးတွေကို အသေးစိတ် လက်လှမ်းမီသလောက် ဆွေးနွေးပြကြည့်ပါရစေ)
Stress ဆိုတာကတော့ အလုပ်ထဲမှာ မှ အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်မှမဟုတ်ပါဘူး။နေ့စဉ် မိမိအသိုင်းအ၀ိုင်းမှာလည်း မိသားစု ၊ ဆွေမျိုး၊ ရပ်ရွာ၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ စတာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးလည်း ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ဒီမှာကတော့ Work Related Stress အကြောင်းကိုပဲ အသားပေးပြောသွားပါရစေ..အလုပ်ထဲ က တကယ့် ကိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ရန်သူပါပဲ။
ဘာကြောင့် Stress ဆိုတာလေးက အဲ့သလောက်တောင် ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ လုပ်ငန်းတွင်းက ရန်သူ ဖြစ်လာ ရပါ သလဲ …?? ?သူ့ကြောင့်မို့ မိမိမှာ ဘာတွေ ဘယ်လို အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ ရလာသလဲ????ဘယ်လို ဆိုးကျိုးတွေများ သူက ပေးလို့ အဲ့သလောက်တောင် ကြောက်စရာကောင်း(သို့) သတိထားစရာကောင်းနေ ရပါသလဲ ????
ဒါတွေကြောင့်ပါတဲ့….Stress ရလာပြီဆိုရင် (အရင်က “ စိတ်ထောင်းကိုယ်ကြေ” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ ရေးခဲ့ပြီးသားမို့ ထပ်ပြီး အကျယ်မချဲ့တော့ဘူးနော..ဒီအကြောင်း ဒီ Topic က တော်တော်ကို များနေလို့ပါခင်ဗျာ..)
Early Warning Signs of Work Stress တဲ့ …Stress တွေသိပ်များလာပြီဆိုရင် ..ဖြစ်တတ်တာတွေကတော့ ...
• Headache ( အောင်မယ်လေး..ခေါင်းတွေ မူးလိုက်တာနော်…ခေါင်းကိုက်တယ်…)
•Sleep Disturbances ( ကောင်းကောင်းကို အိပ်လို့မရဘူး ဆိုတာမျိုး..ပြီးတော့ ဘယ်လောက် အိပ်အိပ် အိပ်ရေး ကောင်းကောင်း မ၀ဘူး လို့. ...ဟူး )
• Difficulty in concentrating ( ဘာကိုမှ လေးလေးနက်နက် သေသေချာချာ အာရုံ စူးစိုက် လို့မရ ဘူးဖြစ် နေတယ် ..မေ့တတ် လျော့တတ်လိုက်တာ လည်း အခုတလော လွန်ပါရောလား…)
• Short Temper (စိတ်တိုလာပြီနော်…..ဆတ်ဆတ်ထိကိုမခံချင်ဘူးဟေ့…)
• Upset Stomach (သိပ်စားမ၀င်..စားဝင်ရင်လည်း..ခဏခဏပြန်ပြန်ပြီး ဗိုက်ကဆာနေတာပဲ)
• Job Dissatisfaction (ဒီအလုပ်ကို ဆက်ကို မလုပ်ချင် တော့ပါဘူး…မလွဲ သာ လို့သာ လုပ်နေရတာ .. ဖြစ်နိုင်ရင် ထွက်တောင် ပြေးချင်တယ်နော်…စိတ်ညစ်တယ်ကွယ်)
• Low Morals ( ငါဟာ အသုံးမကျတဲ့သူ တစ်ယောက်များ ဖြစ်နေပြီလား..ဘာလုပ်လုပ်ကို အဆင်ကိုမပြေဘူး..ငါ့ကံက တော်တော့်ကို ဆိုးတာပဲ ..မကောင်းမှုတွေက ငါ့ဆီကိုပဲ ရောက်ရောက်လာတယ် ..ဘယ်ဘ၀က ၀ဋ်ကြွေး များပါလိမ့်..ညစ်တယ်..ညစ်တယ်..) စလို့..စလို့...
အဲ့သလိုမျိုးတွေ တွေးတတ်လာကြပါတယ်...(Stress ကြောင့်ဖြစ်တတ်တဲ့ လက္ခဏာ အတော်များများကို အရင်က “စိတ်ထောင်းကိုယ်ကြေ” ဆိုတဲ့ စာစုလေးမှာ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။)…Low Morals စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အထိခိုက်ဆုံး ဖြစ်လာရင်တော့ တော်တော်ကို အရေးကြီး ပါတယ်။သတိထားသင့်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူက Physical နဲ့ Mental တွေကို ၀င်ရောက် ပြီး နှောင့် ယှက်တတ် လို့ပါပဲ….
သူက လူကို သတ်တယ်…Sucide ဆိုတဲ့ လူသတ်သမားဟာ Stress ကနေ စလို့ Depression အဆင့်ကိုကျော်ပြီး နောက်ဆုံးအမြင့်ဆုံး Low Morals အဆင့် အနေအထားမှာ သူက ၀င်ဝင် နှိပ်ကွပ်လို့ အကြောင်းမဲ့ ဘာမှ မဟုတ် တဲ့ ပြဿနာ ကနေ အသက်ဆုံး ခဲ့ရသူတွေ မနည်းလှပါဘူး..။
ဒါပေမယ့် ဘာမှ ပူစရာမရှိတော့ပါဘူး…ဒီလိုမဖြစ်အောင် Stress ဆိုတဲ့ လုပ်ငန်းတွင်း က ရန်သူကို နှိမ်နင်းရန် အချိန်ကျရောက်လို့လာပြီဆိုရင် ဘယ်လို နည်းဗျူးဟာတွေ ၊ဘယ်လို စိတ်နေစိတ်ထားတွေ ၊ဘယ်လို အခြေ အနေ ကောင်း တွေ နဲ့ တန်ပြန် တိုက်ခိုက် ကြရမလဲဆိုတဲ့ နည်းလမ်းကောင်းတွေ၊လက်နက်တွေ၊ထိုးစစ်တွေ က အဆင်သင့် ရှိလို့ နေ ပါ ပြီ..။
ပြသနာတစ်ခုကိုဖြေရှင်းဖို့ဆိုတာကလည်း အဲ့ဒီ့ ပြသနာ ရဲ့ Source ကို သိရင် ပိုပြီး ဖြေရှင်းရလွယ်လို…Stress ကို ဖြေရှင်း ကိုင်တွယ် နိုင်အောင် (သို့) လျော့ပါးသွားအောင် လုပ်ဖို့ဆိုတာကလည်း အဲ့ဒီ့ Stress ရဲ့ Source တွေ ၊လုပ်ငန်းတွင်း အလုပ်ခွင်တွင်း က Stress တွေ ကို ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ အကြောင်းတရားတွေကို သိထားရင် ဘာကြောင့် ကိုယ့်မှာ ဒီလိုဖြစ် ရ တယ်.. ဆိုတာနဲ့ ဘယ်လိုဖြေရှင်းကိုင်တွယ်ရမလဲ ဆိုတဲ့ အသိတရား Knowledge ရယ် ပေါင်းစပ်လိုက်ရင် ….ဘာခံနိုင်မှာလဲ တဲ့ အဲ့ဒီ့ Stress ဆိုတာပေါ့...။
အလုပ်/လုပ်ငန်း တွင်းမှာ Stress တွေ ကို ဖြစ်ပေါ်လာအောင် ပြုလုပ်ပေးတတ်တဲ့ Situations ..အကြောင်းလေးတွေ ၊ အခြေအနေလေးတွေ ၊အနေအထားလေးတွေ ကတော့ ကွဲပြားကြပါတယ်။အချက်တိုင်းကတော့ Stressor မဟုတ် ပါနော ..အရင် က ပြောခဲ့သလိုပါပဲ..တစ်ဦးနဲ့တစ်ဥိး က ဘယ်လို အကြောင်းခြင်းရာ Situation တွေကြောင့် Stress ဖြစ်ရတယ် ဆို တာ Case to case လိုက်လို့ မတူကြပါဘူးလို့ ….အဲ့သလို မတူညီတဲ့ source of stress ဒါမှမဟုတ် causes of Work /Job Stress လေးတွေကတော့ ဒီလိုပါတဲ့ …...
Causes of Work Stress/ Causes of Job Stress
Heavy workload, infrequent breaks, little or job control, long hours of work or shift work..
(အလုပ်တွေ မတန်တဆ များနေတာ၊Dead line တွေ လွတ်မလိုဖြစ်တာ(သို့) လွတ်သွားတတ်တာ၊အလုပ်ချိန်အတွင်း နားချိန် Break Times တွေ မရပဲ လုပ်နေရတာ၊…နားချိန်ကိုမရှိဘူးပေါ့နော။အလုပ်ကို မနိုင်နင်းတာ.. မကျွမ်းကျင်တာ။ ..ကူညီမယ့်သူ မရှိ..ညွှန်ပြမယ့်သူ မရှိ (အလုပ်သစ်မှာ ဆို များသောအားဖြင့် ဖြစ်တတ်ပါတယ်)…အလုပ်ချိန်အကြာကြီး ဥပမာ-တစ်နေ့ကို ၁၂ နာရီထက် မနည်း လုပ်ရတာတွေ။..ပြီးတော့ Schedule အချိန်တွေ (Shift ခေါ်မှာပေါ့ နော)…ခဏခဏပြောင်းဆင်းရတာ..နေ့ပိုင်းရောက်လိုက်..ညနေပိုင်းရောက်လိုက် ..ညကြီးပိုင်း ရောက်လိုက် ..လုပ် လိုက် ရ .. စတာ..စတာတွေ ကြောင့်ကလည်း Work Stress ဖြစ်စေတဲ့ တစ်ချက် အပါအ၀င်ပါတဲ့)
Lack of worker participation in decision making, poor communication, lack of family friendly policies...
(အလုပ်ထဲမှာ လိုသလောက် အခွင့်အရေးမရတာ..အခွင့်အရေးအပေးမခံရတာ..performance ကို တတ်စွမ်းသလောက် ပြခွင့်မရှိတာ.ဒါမှမဟုတ်.အနှိ်မ်ခံရတာ..နောက်ပြီး Communication မကောင်းတာ(အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်. တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အဆင်မပြေတာ..ဘာသာစကား အခက်အခဲ…နားလည်မှုလွဲတာ..စတာစတာတွေ)..အလုပ်ထဲမှာ မတည့်အတူ နေ ဖြစ်နေ တာ။..အလုပ်ကို က ဦးတည်ချက်တွေကောင်းကောင်းမပေးနိုင်တာ..job description ဆိုတာ ဘာလဲ မသိ..ခိုင်းတာ ကောက် လုပ် လိုက်ရတာမျိုး။...Standard Operating Procedures(S.O.Ps) ဆိုတာဘာလဲမသိ...ကြုံသလို အဆင်ပြေပြီးပြီးရော လုပ်နေရတာ..စလို့စလို့ Well-Organized မဖြစ်တဲ့ (သို့) Well-managed မလုပ်နိုင်တဲ့ နေရာ အလုပ်မျိုးမှာ လုပ် နေ ရ ရင် လည်းအဲ့ဒါတွေ က မသိမသာ တဖြည်းဖြည်း နဲ့ Work Stress ကို ဖြစ်စေတတ်လာနိုင်ပါတယ်တဲ့)
Poor Social Environment, lack of support from co-workers or supervisors.
(ဘာသာမတူ၊လူမျိုးခြား လို့ က တမျိုး…ရင်းနှီး ကျွမ်းဝင်မှု မရှိတာက တစ်သွယ်…ကျော်မယ်ခွမယ်..ခြေထိုးမယ်..ဂုံးဆင်းကို ဘီး တပ်ပြီး..ချောဆီ များများ ထည့် တွန်းပေး တတ်ကြတဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် မျိုးတွေ(ခုခေတ်တော့ အချွန်နဲ့ မ..တယ် ဆိုပြီး တော်တော်များများ ရေပန်းစားနေတဲ့ စကားလေးလိုပေါ့နော..) တစ်ဦးအခက်အခဲလည်း တစ်ဥိးက မကူညီနိုင်…အင်မတန်မှ ဆိုးတဲ့ Manager , Team Leader, Supervisor စတဲ့ ကိုယ့်ကို ကောင်းကောင်းကို (Bamboo ကျွေးတယ်ခေါ်မလား ) ဆီ လို အပေါက်ရှာပြီး ညစ်ကန်ကန် လုပ်ကြတဲ့ သူမျိုးတွေ နဲ့ အတူ လုပ်နေရတာ …(အဓိကကတော့ Working Environment မ ကောင်း တဲ့ နေရာမျိုးတွေ လိုဆိုရမှာပေါ့နော…) အဲ့ဒီ့လို အခြေအနေတွေကလည်း Work Stress ကို ဖြစ်အောင် အားပေး အားမြှောက် ပြုတတ် ကြပါတယ်တဲ့)
နောက်ထပ် အောက်က အချက်တွေကလည်း Causes of work stress တွေပါပဲတဲ့..
-Pressure for increased productivity ( အလုပ်က ပိုပို များများလာတယ်…မနိုင်မနင်းဖြစ်နေပြီပေါ့)
-Environmental Factors (ခုနက ပြောတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် အနေအထားတွေ.... လုပ်ငန်းတွင်းမှာဆိုရင်တော့ Internal Environment ပေါ့။ကိုယ်က Control လုပ်မယ်ဆိုရင် တစ်ချို့ ကို ရကောင်းရမယ်..အကုန်တော့မဟုတ်ဘူးနော)
ကိုယ်က ထိမ်းချုပ် ကိုင်တွေ မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ External Environmental Factors တွေကျပြန်တော့ ထိမ်းလို့သာမရတယ် .. အလုပ်ကို လာပြီး ကောင်းကောင်း ထိခိုက်စေနိုင်သေးတဲ့
-Economic Uncertainty (နိုင်ငံ ရဲ့ စီးပွါးရေးအနေအထား..ခုဆိုရင်ခေတ်စားနေတာ..ဘာတဲ့ ..Economy Crises ဆိုလား ဘာလားပဲ.တော်တော်ခေတ်စားနေလေရဲ့...း-)
-Political Uncertainty (နိုင်ငံရေး အနေအထား.)
-Technological Uncertainty (နည်းပညာ အားနည်းမှုတွေ၊လျော့ပါးမှုတွေ၊မနိုင်နင်းတာတွေ) စတာစတာ တွေကလည်း အလုပ်ကို ထိခိုက်စေနိုင်လို့..သူတို့ကြောင့်လည်း Stress တွေ ရနိုင်ပါတယ်တဲ့…
(Environmental Factors မှာ Internal နဲ့ External Factors နှစ်မျိုးကွဲပြားတဲ့ အသေးစိတ်အကြောင်းကိုတော့ နောက်ကြုံမှ ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။သူကလည်း နောက်ထပ် topic တစ်ခု ပေါ့နော... ဆားချက် တာမဟုတ် ပါခင်ဗျာ..လုပ်ငန်း တွေအတွက် အရေးကြီးတယ်ဆိုရမှာပါပဲခင်ဗျာ)
အခုလောလော ဆယ်တော့ Stress တွေ ဖြစ်လာရင် ဘာတွေ ဖြစ်လာတတ်တယ်(Physical and Emotional Effects caused by Stress) …ဆိုတာတွေ နဲ့ ပြီးတော့ ဘယ်လို အခြေအနေတွေကြောင့် အလုပ်ထဲ လုပ်ငန်းခွင်ထဲ မှာ အဲ့ဒီ့ Stress တွေ က ဖြစ်လာတတ်ကြတာလဲ (Causes of Work Stress) ဆိုတာလေးတွေ ကို သိသမျှထဲက ကောက်နှုတ်ချက် လေး များပါ ….
အဲ့ဒီ့ လုပ်ငန်းခွင် အတွင်း က ရန်သူလို့ ပြောလို့ ရတဲ့ အဲ့ဒီ့ Stress ကို ဘယ်လို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသင့်သလဲ(Stress Management Strategies) ဆိုတဲ့ အကြောင်းလေးကို နောက်ထပ် စာစုလေးတစ်ခု (စိတ် ထောင်း ကိုယ်ကြေ ပြေလျှော့စေ-၂) အနေနဲ့ လက်လှမ်းမီ သလောက် ကလေး ဆက်လက်ပြီး ဆွေးနွေး သွား ပါရ စေ နော …
ရေးသူ လင်းကြယ်ဖြူ အချိန် 7:15:00 AM 19 ယောက်ရဲ့အမြင်
ကမ္ဘာကြီး ပျက်တော့မယ် ဆိုပါလား....
ကမ္ဘာကြီးက မေတ္တာဓါတ် အာဟာရနဲ့ ဖြူစင်ခြင်း ဓါတ်စာ တွေ ငတ်ပြတ်နေလို့ပျက်ရတော့မှာလား......???
အပြုံးတုတွေ နဲ့ လျှစ်လျူရှုခြင်း ခံ ထားရတဲ့ ကမ္ဘာကြီး ရဲ့ပခုံးနှစ်ဖက် အထက် ဒေါသတွေထွက်ရင်း လမ်းလျှောက်သံတွေက ခပ်ပြင်းပြင်း ဆိုတော့ အဲ့ဒီ့ ဒဏ် ကို သူမခံနိုင်လို့များလား......???
ဒါမှမဟုတ် သူ့နှလုံးသား ပင်လယ်ပြင်ကျယ်ကျယ်တွေထဲကို စီးမျောလာတဲ့ မျက်ရည်ပူတွေနဲ့ သွေးစက်တွေကြောင့် အတွင်းဒဏ် သင့် သွားခြင်းရော ဖြစ်နေမလား......???
သူ ရှုမိ ရှိုက်မိ တဲ့ လေပြေညင်းတွေ ကြားမှာ အခိုးငွေ့ညစ်ငြမ်းမှုတွေ များနေတာကြောင့် အသက်ရှုရတာ မ၀ လို့ ရော များ ဖြစ်နိုင်သလား . . . .???
သူ....နှလုံးသွေးတွေနဲ့ ရင်းခဲ့ ပျိုးခဲ့ ရတဲ့ အလှပန်းခင်းတွေ စိမ်းလန်းခြင်းတွေ ကို အကြာကြီး တည်ဆောက်ခဲ့ရ ပြီးမှ တစ် ခဏ အတွင်း ပျက်သုန်းခြင်း အတော်များများကို မြင်တွေ့ ခံစားရင်း ရင်ကွဲနာ နှလုံးနာ ကျသွား လို့များလား....???
အင်း... တွေးစရာတွေ ကတော့ ခပ်များများ နဲ့ပေါ့ .....
ဒီလို ကမ္ဘာပျက်တော့မယ်...ကမ္ဘာပျက်တော့မယ်..နဲ့.... ငါကိုယ်တိုင် ကကော ရက်ရက်စက်စက် ကမ္ဘာကို ဖျက် ခဲ့မိ သေး လား မသိ...???
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ရင်ကွဲပက်လက် နဲ့ သူပျက်တော့မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းစကားဆိုးတွေ ကို မြိန်ရည်လျှက်ရည် ဆိုညည်းနေကြ သံတွေ အပေါ်မှာ တော့ ကမ္ဘာဆိုတဲ့ အဲ့ဒီ့ ကမ္ဘာ က ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့စွာ ရက်ရက်ရောရော တုန့်ပြန်နာ ကြား ခံယူ နေ နိုင် ဆဲ ပါပဲလား ....!!!!!
( မနှင်း တောင် မေ့နေလောက်ပါပြီ .TAG ထားတာလေးကို အချိန်လုရင်း ခံစားမိသလို စာစုလေးအဖြစ် ရေးချ လိုက်မိပါတယ် ..ပြီးတော့ ကျွန်တော် ဒီစာကို ရေးနေစဉ်မှာ ကျွန်တော်အားနည်းတဲ့ စာလုံးပေါင်းတွေကို အမှန်ဝါကျ ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ အခန်းဖော် သူငယ်ချင်း ကို ခိုင် နဲ့ ရွှေစင် တို့ကို ကျေးဇူးပါလို့ )
ရေးသူ လင်းကြယ်ဖြူ အချိန် 5:03:00 AM 20 ယောက်ရဲ့အမြင်
ကျွန်တော့် PC ပျက်နေတုန်း ခဏ မှာ Post တင်တာ အိမ်လည်တာ ပျက်ကွက်နေ ခဲ့ပေမယ့် အခင်အမင်မပျက် နှုတ်ဆက်လာကြ တဲ့ မိတ်ဆွေတွေ အားလုံး ကို ကျေးဇူးပါနော..
နေ့တဒူဝတွေ ထဲက ကိစ္စမျိုးစုံတွေအကြား အလုပ်များနေတဲ့ မိတ်ဆွေများအတွက် Stress နဲ့ ပတ်သက်တာလေး မှတ်သား မိ သလောက် လက်လှမ်းမီသလောက် ကလေးပါ...
Stress တွေ သိပ်များနေရင် ဖြစ်တတ်တဲ့ လက္ခဏာလေးတွေကို နိစ္စဒူဝ တွေကြားမှာ သတိထားသင့်တယ်ထင်လို့ပါနော....
Stress is your body's reaction to the demands placed upon it and can have PHYSICAL and PSYCHOLOGICAL / EMOTIONAL effects on the human mind and body .Taking extra care to recognize when your body is reacting toaheightened stress level can make difference in your well-being .
Psychological / Emotional Effects of Stress Include:
Health Problems Linked to High Level of Stress:
Stress ကို ဘယ်လို Handle လုပ်သင့်သလဲ ဆိုတာကို တော့ အချိန်ရရင် နောက်တစ်ခါမှာ ကြိုးစားပြီး ရေးကြည့်ပါ ဦးမယ်ခင်ဗျာ ....
ရေးသူ လင်းကြယ်ဖြူ အချိန် 7:53:00 AM 21 ယောက်ရဲ့အမြင်